Qaabka Wasmada‎ naagaha ugu jecelyihiin? - iftineducation.com ≡Navigasi Menu
Home → aqoonta galmada → galmada → wasmada
→ Qaabka Wasmada‎ naagaha ugu jecelyihiin?
iftineducation.com - Naagaha waxay ugu jecelyihiin inay dhabar dhabar u seexdaan oo kaddib ninka ku kor seexdo, si daran ayay ugu raaxaysanayaan qaabkan, maxaayeelay waxaa isku dhegaya qaska ninka iyo qaska haweeneyda wuxuu ku yeelanayaa saamayn weyn culayskaas soo fuulaya farjigeeda.
Hello Am Mrs, Morgan Debra Am amaahiye amaah sharci ah oo lagu kalsoonaan karo siin deynon a eego cad oo la fahmi karo iyo xaaladda dulsaar 2%. Laga soo bilaabo$ 12000 in $ 7000000 USD, Euro Markaasuu oo ginni oo keliya. Waxaan bixin Business Deymaha,Daymaha shaqsiga, Amaahda Ardayda, Deyn gaariga iyo Deyn bixin biilasha. Haddii aadu baahan tahay si amaah ah waxa ay tahay inaad sameyso yahay, waayo, waxaad si toos ah ii soo xiriirat: morgandebra1986@gmail.comIlaah ha idiin barakeeyo.Salaan,Mrs Debra MorganEmail: morgandebra1986@gmail.comFiiro gaar ah: Dhamaan reply waa in la soo dir: morgandebra1986@gmail.com
anigane waxaan aad uga helaa raaxada gabdhaha dareenka badan hadii tahay pls ila soo xiriir wan hubaa in aad raaxadeeda ka heleysid skype risaan77 ama imo +17018027709 Waa Ka Mamnuuc Cayda iyo Qabyaaladda, Waxeey ufurantahay Kaliya Fikir Isweedaarsi Mahadsanidiin Newer Post